Fikambanana Malagasy mandray andraikitra Hidina ifotony rehefa misy mitaraina
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina omaly ny fijoroan’ny fikambanana MAlagasy Mandray Andraikitra (MA.M.A).
Ny 18 mey teo, raha ny fanazavana no tena nijoroan’izy ity saingy izao vao nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy. Hiaro ny harem-pirenena, ny tontolo iainana, ny kolontsaina ary hamerina ny afom-pitiavan-tanindrazana any anatin’ny tsirairay avy sy hiady amin’ny tsindry hazo lena no antom-pisian’ny fikambanana. Tsy afa-miala amin’ny raharaha politika ihany koa anefa izahay, hoy izy ireo, amin’ny maha olom-pirenena mandray andraikitra anay ka antony hiantsoanay ny filoha Andry Rajoelina, hirotsaka ho filoham-pirenena. Tsy nety nanazava ny anton’ny safidy moa ny fikambanana. Ny endriky ny fandraisanay andraikitra kosa, hoy izy ireo, dia amin’ny alalan’ny fidinana ifotony miaraka amin’ny manampahaizana rehefa mandre fitarainana.